गुल्मीमा कस्तो छ नयाँ शक्ती नेपालको चुनावी माहौल? तेजेन्द्र थापासँगको अन्तर्वाता – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गुल्मीमा कस्तो छ नयाँ शक्ती नेपालको चुनावी माहौल? तेजेन्द्र थापासँगको अन्तर्वाता
गुल्मीमा कस्तो छ नयाँ शक्ती नेपालको चुनावी माहौल? तेजेन्द्र थापासँगको अन्तर्वाता
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर १७, आईतवार १८:०९ मा प्रकाशित
मङ्सिर १७ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु यतिबेला ब्यापक प्रचार-प्रसारमा लागेका छन् । यही मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन जती जती नजिकिँदै छ प्रचार प्रसारलाई गुल्मीमा उती उती जोडतोडका साथ लैजाँदै छन् सबैजसो दलका उम्मेदवारहरु ।
गुल्मीमा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा बाम गठबन्दन र नेपाली कांग्रेसलाई हेरिए पनि नयाँ शक्ती नेपाललाई पनि बिर्सन नहुने कुरा बताउँछन् नयाँ शक्ती नेपाल गुल्मीका संयोजक तेजेन्द्र थापा । थापा गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट नयाँ शक्ती नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधी सभाका उम्मेदवार हुन् । खासमा गुल्मीमा कस्तो छ नयाँ शक्ती नेपालको चुनावी माहौल? के हुन् उनका एजेण्डा ? गुल्मेली जनताले उनलाई किन भोट दिने? यि र यस्तै बिषयमा थापासँग गरिएको कुराकानी हेरौँ: